Ndinokwanisa here kuita nyore nzira yekuvaka backlinks uchishandisa script backlink?
Wati wamboshamisika sei kuti uwane hutsva hwemashure ekudzoka kubva mumifananidzo? Iyo inzira yekuvakiridzira yekubatana yakawanda yevashumbisi webmasters vasingazivi kana kusangwarira simba rayo. Zvisinei, muzvokwadi, pane imwe mifananidzo yepaIndaneti inogona kukoshesa zviyero zvine zana. Kuisa pfungwa pamashoko-based link building kunogona kukuita kuti urege kukanganiswa nemasikirwo ekugadzira mazano ekubatanidza - chivako chekugadzira mifananidzo. Iwe unogona kuratidza ruzivo rwakakosha ruzhinji kuburikidza nehuwandu hwezvinhu zvakadai se infographics, mavhidhiyo, mapikicha, nezvimwe zvakadaro - avene hidratante optimale.
Regai tinyatsocherechedza mamwe maitiro ekugadzira mazano anokwanisa kukubatsira kugadzira mazano kubva kumifananidzo.
Nzira yekugadzira sei mifananidzo inokwevera magwara uye kumashure?
Chokutanga pane zvose, ndingada kutaura nezvekukosha kwezvinhu zvakaratidzwa. Zvinhu zvinotaridzika zvine simba rakawanda pane kungofananidza mazwi nemifananidzo. Kana vakanyatsoita, vanopa ruzivo, zvakajeka, kana pfungwa itsva pamusoro pehurukuro yaunoda.
Kukwezva chitunha kunzvimbo yako yewebhu, unofanirwa kuumba zvinhu zvakakosha zvinoonekwa nemashoko ekubata. Vashandi vanowanzotaurirana zvimwe zvinyorwa, majee, uye memes. Zvisinei, kana iwe hausi muumbi, zvinogona kunge zvakakunetsa kuti iwe uise zvinhu zvose pamwechete. Zvisinei, pane nguva dzose nzira yekubuda nayo. Iwe unokwanisa kuenzanisa mabasa akadhura seFiverr kuti uite mufananidzo wakajeka. Uyezve, unogona kuwana gigs yakasiyana-siyana. Vachabvumirana nekugadzira firimu yakanakisa iri nyore pane yako zvinyorwa chikamu pamutengo usinganzwisisiki munguva pfupi. Zvisinei, kana uchida chimwe chinhu chakaoma, chinoda unyanzvi hwokutaura, saka iwe unoda kubhadhara mumba.
Zvakaoma kutaura kuti kana chifananidzo ichi chichikwevera nzira dzakawanda kune zvaunenge uchiverenga kana kwete, asi zvichatibatsira kunzwisisa pfungwa iri shure kwechinyorwa.
Infographic isimba zvombo zvekuwana backlinks. Vashandi vewebhu vanoishandisa kuti vagamuchire vaverengi uye vanoita kuti vave vakavimbika kune cheki. Mabhizimisi maduku kazhinji anowedzera infographics muhupenyu hwavo kuwana hutano husingaverengeki kubva kune vanotengesa vatengi vemasoka.
Chokutanga pane zvose, unoda kuita Google tsvakurudzo kuti uwane zvido zvehuwandu hwehupfumi. Shandisa mibvunzo inotevera kuti uwane zvakakunakira - "keyword" + "infographic"; "Best keyword infographics"; "Keyword infographics. "Zvadaro tarisa kuburikidza nemigumisiro yakawanikwa uye uwane yakanakisisa.
Kana bhizimisi rako richiiswa mune imwe nhepfenyuro isingazivikanwi, unogona kushandisa mamwe mabhuku ekufananidzira uko unogona kuwana zvose. Imwe yezvinyorwa zvinonyanya kuzivikanwa ndezvekuona. ly and Pinterest.
Kana uchangobva kuwana chimiro chakanaka, iwe uchada kutsvaga musoro unoshanda zvakanakisisa pane niche yako. Uchishandisa zvataurwa pamusoro apa mapeji, unogona kubudisa mafungiro uye kuwana pfungwa yekuti ndeapi maitiro e infographics anowanzova mukurumbira.
Panzvimbo inotevera, unoda kuwana deta yako pamwechete. Sezvo chinangwa chenyu chekutanga ndechokutora infographic yako kubva kune dzimwe nhu dzakawanda dzine chokuita newebhu, unoda kuwana mashoko ako zvakanyatsonaka. Uye kunze kwekuti data yako inonakidza, hazvigone kuendeswa kuForbes kana Harvard. edu. Zvisinei, inogona kuve nyore kubatanidzwa neyakakurumbira webhu hutsva mumudhizimusi wako.